UDeker: UMartin Vrijland
Izikhungo zentsha zizwakala zinomsindo ngokuhlukumezeka ngoba 'ukunakekelwa' empeleni kuhlukunyezwa?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-4 November 2019	• 11 Amazwana
Ungqongqoshe uSander Dekker (uyawazi lawo majaji, abona wonke umuntu njengamkhwenyana ofanele, kodwa mhlawumbe oyimpisi egqoke izingubo zezimvu) uthi uthuswa wukuqina kwezigameko zokunakekelwa kwentsha. Yebo, uSander, mhlawumbe kungenxa yokuthi uGeorge Orwell usevele wachaza encwadini yakhe 1984 ukuthi iyini i-newspoken. Ku […]
Isikhalazo: Ukuhlolwa okuphoqelekile kwengqondo uMark Rutte noSander Dekker ku-Anne Faber icala
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-3 April 2019	• 16 Amazwana
Ngoba kubonakala sengathi icala lika-Anne Faber yiNkinga, Ukuphendula, Isixazululo, i-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) okumelwe kuqinisekiswe ukuthi wonke umuntu angahlolwa ngophenyo ngaphandle kwemvume futhi angatholakala kuhulumeni, sifuna ukuthi osopolitiki nabo kumele baphenye. Funda yonke ifayela [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 14.508.215
guppy op Esimweni samaphoyisa, ufuna ukuvinjelwa kwamaphoyisa wokuthwebula ukuqhafaza kanye nabahlinzeki "bokusiza"
Ukushona kwelanga op Yazi umlando ukuze uqonde i-ajenda ye-UN 2030
SandinG op Yazi umlando ukuze uqonde i-ajenda ye-UN 2030
Ikhamera ye-2 op Yini iqiniso ngokubulawa kukaDerk Wstersum futhi kusho ukuthini lokho 'ngofakazi bomqhele'?
SalmonInClick op Esimweni samaphoyisa, ufuna ukuvinjelwa kwamaphoyisa wokuthwebula ukuqhafaza kanye nabahlinzeki "bokusiza"